सवारीसाधन तीव्र हुइँक्याउनेहरू सावधान ! ट्राफिक प्रहरीले ल्यायो ‘राडर गन’ — Bhugolnews
सवारीसाधन तीव्र हुइँक्याउनेहरू सावधान ! ट्राफिक प्रहरीले ल्यायो ‘राडर गन’
बुटवल । के तपाईले तीब्र गतिमा आफ्नो सवारीसाधन हुइँक्याउनुभएको त छैन ? ट्राफिक प्रहरी नभएको फाइदा उठाउँदै तीब्र गतिमा सवारी चलाउँदै हुनुहुन्छ ? यदि यो गर्नुभएको छ भने तपाई ट्राफिक प्रहरीको फन्दामा पनुहोला ख्याल गर्नुहोस् ।
तीब्र गतिमा हुुइँकिने सवारी साधनका कारण दुुर्घटना बढेपछि ५ नम्बर प्रदेशको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलले ‘राडर गन’ (सवारी साधनको गति मापन) शुरू गरेको छ । ट्राफिक प्रहरीले राडरको प्रयोग गरी गति मापन गर्ने र तोकिएकोभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाउने चालकलाई कारवाही गरिने प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी उपरीक्षक गणेश चन्दले बताए ।
राडरले ८० देखि सय मिटरसम्मको गति मापन गर्नेछ । प्रहरीले पहिलो चरणमा गति नियन्त्रणका लागि चालकलाई सचेत गराउने र त्यसपछि पनि चालकले मापदण्डभन्दा बढी गतिमा चलाएमा कारवाही गर्ने रणनीति बनाएको प्रहरी नायव उपरीक्षक माधवप्रसाद बुढाथोकीले बताए ।
मंगलवारदेखि प्रहरीले बुटवल क्षेत्रमा राडरबाट गति मापन गर्न शुरू गरिएको छ । राडरले पाल्पाबाट आउने गाडीहरूलाई शिद्धबाबा नजिकैबाटै निरीक्षण गरिने छ । बुधवारदेखि भैरहवा क्षेत्रमा पनि गति मापनसँगै चालकलाई गति सीमितताको विषयमा जानकारी गराइएको छ ।
कार्यक्रमलाई क्रमशः प्रदेशभर १२ वटै जिल्लामा सञ्चालन गरिने प्रदेश ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । ओभर स्पीडका कारण सवारी दुर्घटना बढेकोले गति नियन्त्रणलाई अभियानका रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको प्रहरी उपरीक्षक चन्दले बताए ।
पछिल्लो समय ५ नम्बर प्रदेशमा सवारी दुर्घटना हवात्तै बढेको छ । सडक विभागले निर्धारण गरेको गति अनुसार अब सवारी चालकले गाडीहरू चलाउनुपर्नेछ । बजार क्षेत्रमा टिप्परको गति तीब्र भएपछि ट्राफिक प्रहरीले टाइम कार्ड लागू गरेको थियो ।
के हो ‘राडर गन’ ?
सवारीसाधनको गति टाढैबाट पनि पत्ता लाउने उपकरण हो ‘राडर गन’ । यसले कुनै पनि सवारीको ८० देखि १ सय मिटर अगाडिबाट त्यो गाडी कतिको स्पिडका गुडेको छ भन्ने पत्ता लगाउन सक्छ ।
विश्वका विभिन्न शहरमा प्रयोग भइसकेको यो यन्त्र हालै नेपाली प्रहरीले काठमाडौं लगायत प्रदेशका विभिन्न ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई पनि उपलब्ध गराएको छ । ५ नम्बर प्रदेशमा २ वटा ‘राडर गन’ आएका छन् । एउटा प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र अर्को जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले यसको प्रयोग गर्नेछन् ।
डरलाग्दो दुर्घटनाको अवस्था
प्रदेशमा सडक दुर्घटनाको अवस्था डरलाग्दो छ । प्रदेशमा हरेक दिनजसो दैनिक ३ देखि ४ वटासम्म सडक दुर्घटना भएका छन् । प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ अनुसार ८ सय ५६ दुर्घटना भएका छन् । जसमा परी ८ सय ५४ जनाको मृत्यु भएको छ ।
त्यसमध्ये ८ सय ५० जना गम्भीर घाइते र ५ सय ७१ सामान्य घाइते भएका छन् । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को माघ मसान्तसम्म ६ सय ४० दुर्घटना भएका छन् । जसमा ३ सय ४८ मृत्यु भएको छ । जसमा ५ सय ५५ जना गम्भीर घाइते र ४ सय ४८ जना सामान्य घाइते भएका छन् ।
दुर्घटनाको मुख्य कारण के ?
सडक दुर्घटनाको मुख्य कारण चालकको लापरवाही बढी देखिन्छ । सडक दुर्घटना ८० प्रतिशत चालकको लापरवाहीले हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीले बताउँछ । त्यसपछि सडकको अवस्था, पुराना सवारी साधन र यात्रुको कारणले हुने बताइएको छ ।
कति छ प्रदेशमा सडक सञ्जाल ?
प्रदेश नेपालको मध्य भागमा रहेको छ । प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा सडक सञ्जाल पुगेको छ । प्रदेशमा ९ हजार ७ सय ११ किलोमिटर सडक सञ्चाल रहेको छ । जसमध्ये कालोपत्रे सडक १ हजार ८ सय ८९ किलोमिटर छ । त्यस्तै झण्डै २ हजार ९ सय ४१ किलोमिटर ग्राभेल र ४ हजार ९ सय २१ किलोमिटर कच्ची सडक छ ।
कति गुड्छन सवारीसाधन ?
प्रदेश ५ साविक लुम्बिनी, राप्ती र भेरी अञ्चल समेटेर बनेको प्रदेश हो । प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीमा ५ लाख ६८ हजार ८ सय ७६ गाडी दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी राप्तीमा ४९ हजार २ सय ३८ र भेरीमा ९९ हजार २ सय ५ सवारी दर्ता छन् । समग्र प्रदेशमा गरी ८ लाख गाडीहरू छ । त्यसमध्ये ५ लाख ५० हजार भन्दा गुडने बुढाथोकी बताउँछन् ।